4-taan Qodob Ninkii Xaaskiisa Usameeya Weligeed ma Hilmaamto Akhriso. | shumis.net
Home » galmada » 4-taan Qodob Ninkii Xaaskiisa Usameeya Weligeed ma Hilmaamto Akhriso.
4-taan Qodob Ninkii Xaaskiisa Usameeya Weligeed ma Hilmaamto Akhriso.
Nin walbo waxa uu jecelyahay inuu subaxdii kasoo tago xaaskiisa oo faraxsan goortuu laabtana Farxad iyo soo dhaweyn heer sare ah loo sameeyo , hadana Sirhufan.com ayaa Qodobo muhiim ah kusiineysa oo aad qalbiga xaaskaaga ku kasban kartid waana kuwa aad ufudud fulintooda.
Xaaskaaga ood qalbigeeda kasbataa waa sahal balse ma jirto qodobo gooni loogu kasbado qeyb kamid ah hoos ka akhriso.
Waa muhiim inaad waqti kufilan siisid dhageesiga waxyaabaha ay jeceshahay inaay kuu sheegato , ka dhageeso hadalada ay ku leedahay tixgalin iyo balan qaad usameey.
Ha iska dhaadhacsiin sida Rag badan oo inaga mid ahi u aaminsanyihiin in shaqada guriga ay gaar u tahay Haweenka , waa muhiim inaad waqti siisid caawinta xaaskaaga , la hagaaji guriga qiimeen la sameey fikradaada ku kordhi , hadii ay awlaad kuu heeyso isku day inaad dheelintooda ku dadaashid aadbaay ujeceshahay ineey aragto caruurteeda ood sifiican u cayaarsiineeysid.
Sida dhabta ah waxay xaaskaagu kaa mudan tahay Naxariis joogta ah adigoo ixtiraam gooni ah siinaayo soo dhaweeynaayo hadaladeeda kuna dhiira galinaayo waxyaabaha ay wada tashiga kaala sameeyneyso.
Inaad ku taageertid waqtiyada ay kuu baahantahay sida marka ay garabka kaaga baahantahay istaag midigteeda sax iyo khaladba , ciidanka ay ku tashanayso waa adiga , Halyeeyga nolosheedu waa adiga , Hub aanan ka dhamaan unoqo.
Title: 4-taan Qodob Ninkii Xaaskiisa Usameeya Weligeed ma Hilmaamto Akhriso.